Ukuphonononga kunye namanqaku eIacobus nguMatilde Asensi - Ikkaro
yokuqalisa >> Iincwadi >> Iacobus nguMatilde Asensi
Andizukufumanisa okwangoku UMateldi asensi okanye iinoveli zakhe. Iacobus yeyesithathu okanye yesine endiyifundileyo, andisayikhumbuli kakuhle, kwaye njengesiqhelo yinoveli emiswe kakuhle. Agile, ngokukhawuleza kwaye kunomdla.
Iacobus ilungile xa ufuna ukukhanya, ukufundwa kwimbali kunye nokuzonwabisa. Uya kuyithanda ukuba uthanda izinto ezinxulumene neeTemplars kunye noMyalelo weNdlu.
Isenzo senzeka kwinkulungwane ye-XIII-XIV, emva kokupheliswa koMyalelo weNdlu. Imonki yomkhosi wezomkhosi weSibhedlele saseSan Juan, esaziwa ngobuchule bokutsala okanye ubucuphi, sithunyelwa nguPopu John XXII ukuba ayokuphanda ngokusweleka kukaPopu Clement V kunye noKing Philip IV emva kwesiqalekiso esenziwe ngu-Grand Master of the Order yetempile eza kwenziwa kwisibonda.
Ku malunga UGalcerán wazalwa, I Persiquitore kwaye oku kuya kubangela uhambo ngokusebenzisa iimeko ezahlukeneyo ezinjengeParis, Avignon kunye neCamino de Santiago ukuya eFinisterre. Ukudibanisa, umkhosi, itemplar, isibhedlele kunye nemiyalelo yamaJuda ejikeleze imbali yobuqu yabalinganiswa abaphambili.
Kuluhambo olukhawulezayo apho indawo enkulu yezembali idityaniswa kunye nesenzo kunye nokuzonwabisa.
Ndizonwabele kakhulu iinkcazo kunye nokubekwa kwekota yamaJuda, kuba esixekweni sam, sinento eyayibalulekile kwikota yamaJuda de kwagxothwa ziiKumkani zamaKatolika kwaye ezenza indawo entle kakhulu namhlanje. Ukuhambahamba ngekota yamaYuda namhlanje kukucinga ngamabali akudala.
Izihloko ezinomdla zokuKhumbula kunye noPhando
Indawo yakade emotjhekileko ku Las Médulas
Umzuzu xa uchaza IiLas Medulas, enkulu kakhulu Ubukhosi baseRoma bavule umgodi wegolide. Ifumaneka e-El Bierzo eLeón.
Icacisa kwakhona Intshabalalo yeMontium okanye iMigodi emifutshane yinkqubo yemigodi esetyenziswa ngamaRoma ukufumana igolide. Iqukethe ukudiliza intaba.
Ukukhankanywa kukaPliny kwandivusa inkumbulo. Kwimbalasane yakhe Imbali yeNdaloIsilumko sase-Roma sathetha ngomsebenzi omkhulu wezemigodi owenziwa ngu-Emperor ka-Agasti e-Hispania Citerior emva kwexesha lethu. Indawo enye kuloo Roma Hispania yayifanele yonke ingqwalaselo yomfundi: yiLas Médulas, apho amaRoma afumana amawaka amabini eeponti zegolide esulungekileyo ngonyaka. Inkqubo esetyenzisiweyo ukutsala intsimbi emhlabeni yayiyinto ebizwa ngokuba yilahleko yemontium, eyayiquka ukukhupha ngesiquphe isixa esikhulu samanzi kumachibi ayoyikekayo akwiindawo eziphezulu zeentaba zeAquilanos. Amanzi akhutshiweyo ehla ngomsindo kwimilambo esixhenxe kwaye, ekufikeni eLas Médulas, bexinekile kuthungelwano lwegalari ezazembiwa ngamakhoboka ngaphambili, zabangela ukuwa komhlaba okukhulu kwagqobhoza umhlaba. Amathambo auriferous atsalwa agogas, okanye amachibi amakhulu asebenza njengeendawo zokuhlamba iimpahla, apho kwakuqokelelwa khona kwaye kucocwe isinyithi segolide. Wonke lo msebenzi uqhubeka ngaphandle kokuphazanyiswa kangangamakhulu amabini eminyaka.
Iacobus (uMatilde Asensi)
Malunga nemiyalelo yasemkhosini
Yintoni ebangela ukuba ndicinge kunye nezinye izihloko endifuna ulwazi ngakumbi ngazo malunga nee-odolo ezahlukeneyo ozikhankanyileyo
Umyalelo weSibhedlele sikaJohn Saint waseJerusalem
Kanye njengoko kwenzekayo xa ufunda Ikhowudi yeDa VinciYonke imizobo evumela ukufumana ulwazi kwindalo esingqongileyo ibonakala inomdla kum. Iishelufu, imilenze yerhanisi, izakhiwo ezinamacala amathandathu, njl.
Iitemplars kunye neValencia, iSagunto, iCamp de Morvedre
Ndiyathanda ukuzisa ulwazi olwahlukileyo endilufumanayo kwimeko yengingqi kwaye indingqongile.
Ngale ndlela nasemva kokubona umzekelo indlela ekufuneka bechonge ngayo izakhiwo zeTemplar ngohlobo lwe-octagonal, ndiyazibuza.
Ngaba zikhona izakhiwo zeTemplar apho ndihlala khona?
Ngaba kukho izifundo kuyo
2.1 Indawo yakade emotjhekileko ku Las Médulas
2.2 Malunga nemiyalelo yasemkhosini
2.4 Iitemplars kunye neValencia, iSagunto, iCamp de Morvedre